Hel talaal hadda! (Somali) - COVID-19 | seattle.gov
Bixiyaha Daryeelkaaga Caafimaadka
Ka hel balamo xafiiska dhakhtarkaaga ama bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga. Haddii aanad lahayn caymis caafimaad hubi u-qalmitaankaaga Apple Health (Medicaid).
Ka hel balamo Caafimaadka Dadwaynaha- Rugaha caafimaadka Seattle iyo degmada King oo ay ku jiraan kaalmada daryeelka carruurta, hoyga naafada iyo gaadiidka bilaashka ah.
Ka hel balamo goobaha Iskaashiga ee daryeelka caafimaadka Seattle iyo gobolka oo dhan oo ay ku jiraan farmashiyeyaasha, rugaha caafimaadka, iyo xarumaha caafimaadka.
Ciidamaha wadanka ee hore
Ka hel balamo rugaha caafimaadka ee Puget Sound ee Silverlake, Seattle, American Lake iyo Mount Vernon.
Deggeneyaashu waxay sidoo kale ballan uga dhigan karaan ballamo taleefan goob kasta 0o ka mid ah iyagoo ka wacaya Somali Health Board (253) 317-3251 inta udhaxeysa Isniinta ilaa Khamiista, 9:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo.
Tallaalada COVID-19 ee carruurta 5-11 ee Pfizer ayaa ansaxiyay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA). Waxayna ku dhawaqeen inay yihiin kuwa badbaado iyo waxtar ay leh iyo sidoo kale Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) ayaa oggolaaday Isticmaalka Degdegga ah ee talaalka caruurta. Talaalka carruurta ayaa muhiim u ah ammaankooda, iyo sidoo kale tan qoysaskooda, macallimiintooda, iyo ardayda ay isku fasalka yihiin. Sida ballan loo helo:
Dugsiyada Dadweynaha Seattle waxay leeyihiin maalin-dugsiyeedka iyo rugaha caafimaadka gobolka ee carruurta 5-11. Halkan ka eeg jadwalka (Bogga waxa lagu heli karaa af Ingiriis oo keliya.)
La-hawlgalayaal badan oo bulshada ah ayaa laga yaabaa inay ballamo u yeeshaan carruurta 5-11. Halkan ka raadi, ku shaandhee nooca tallaalka. (Bogga waxa lagu heli karaa Ingiriis oo keliya.)
Ballamo cusub ayaa si joogto ah loogu daraa qaar badan oo ka mid ah rugahaan. Haddii midna hadda la heli waayo, fadlan mar kale hubi hadhow.
U-qalmitaanka Tallaalka xoojiyaha ah
Cirbadaha xoojiyaasha ee tallaalada COVID-19 ee Pfizer iyo Moderna ayaa hadda ansixiyay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) iyo Xarumaha Xakamaynta Kahortagga Cudurrada (CDC). Waxayna ku dhawaaqday inay yihiin kuwa badbaado iyo wax ku ool ah. U qalmida way ku kala duwan tahay nooca xoojisa tallaalka. Keliya Pfizer booster ayaa hadda loo oggolaaday dadka ka yar 18 jir. Cirbadaha xoojinta waxay xoojiyaan ilaalintaada caabuqa iyo jirrooyinka halista ah oo ay ku jiraan noocyada Delta iyo Omicron.
Haddii aad qaadatay tallaalka Pfizer: qof kasta oo 12+ jira wuxuu xaq u leeyahay xoojiye 5 bilood ka dib qiyaasta labaad. Carruurta da'doodu u dhaxayso 5-11 ee dhexdhexaadka ah ama si daran u liito difaaca jirkooda waxay heli karaan xoojiye 5 bilood ka dib cirbada labaad
Haddii aad qaadatay tallaalka Moderna: qof kasta oo 18+ jira wuxuu xaq u leeyahay xoojiye 6 bilood ka dib markii ay qaateen tallaalka cirbadiisa labaad
Haddii aad qaadatay tallaalka Johnson iyo Johnson: qof kasta oo 18+ jira wuxuu xaq u leeyahay xoojiye 2 bilood ka dib markii ugu horreysey
CDC waxay u ogolaataa shakhsiyaadka inay isku daraan oo ay isbarbardhigaan cirbadaha tallaalada xoojiyeyaasha, markaa xoojiyaha uma baahna inuu la mid noqdo tallaalkaada asalka ah ee qofku horey u qaatay. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan COVID-19 tallaalada xoojiyayaasha ee CDC halkan. (Bogga waxa lagu heli karaa af Ingiriis oo keliya.)